Project Linda ma ọ bụ mgbe ekwentị Razer gị na-ebugharị | Akụkọ akụrụngwa
Ọ dịbeghị anya ịchọta nke ahụ ọhụụ ọhụụ nwere ike ịrụ ọrụ dị ka ụbụrụ nke igwe ọ bụla. Nke a bụ ihe ha ga-eche site na Razer na ekwentị Razer ya, ngwanrọ gam akporo dị ike nke lekwasịrị anya Ịgba Cha Cha; Na ndị ọzọ okwu: ya teknuzu e ji mara bụ n'etiti ndị kasị dị ike. Ọ bụghị nanị na Razer na-ere ekwentị a, kamakwa o nwere ọtụtụ ahụmahụ na laptọọpụ. Yabụ, ọ bụrụ na anyị sonyere ụwa abụọ, aha na-eweta ya bụ: Linda ọrụ.
Razer na-arụ ọrụ na ngwa pụrụ iche nke iji nweta ọtụtụ ihe na ekwentị Razer. Ngwa a dịkwa n’ụdị laptọọpụ. N'oge ọ bụ echiche ma gosipụta ya na CES 2018. Otú ọ dị, echiche a ga-abanye na mmepụta obere oge na ụgwọ ya ga-abụ dollar 99 —Anyị chere na ego a ga-abanye na euro 99. Mana ka anyị lee ihe Linda Project a bụ.
Dịka ị pụrụ ịhụ na vidiyo dị n'elu, ekwentị Razer ga-abụ akụrụngwa anyị bụ isi agbakwunyere na ihe ga-abụ trackpad nke laptọọpụ. Ozugbo a gbakọtara ìgwè abụọ ahụ, Project Linda ga-aghọ laptọọpụ gam akporo nke igwu egwu karia nkasi obi.
Akwụkwọ ndetu a nwere 13,3-anụ ọhịa multi-ihuenyo mmetụ diagonally na-enye oke mkpebi QHD. N'otu aka ahụ, enwere ike ịhazi keyboard ahụ, ọ bụghị naanị na ọkụ dị ka Razer maara, kamakwa na ọrụ. Na mgbakwunye, ịbụ ndọtị nke Razer Phone, ọrụ a Linda nwekwara igodo gam akporo iji nwee ike ịnyagharịa ọsịsọ na nkasi obi site na menu dị iche iche nke ekwentị. Mgbe, arọ nke a oru ngo Linda bụ nnọọ ala: ya Chassis ka nke aluminom na ọkpụrụkpụ bụ 1,5 sentimita.
N'aka nke ọzọ, ngwa a ga - enye gị ohere ibudata ngwa ma chekwaa ụdị faịlụ niile ebe ọ nwere 200 GB n'ime nchekwa nchekwa. Otu akụkụ nke masịrị anyị bụ na ha na-eji ndị ọkà okwu ihu n'ihu ekwentị Razer eme ihe nke mere na ndị a bụ laptọọpụ a na-ekwu okwu. Enweghi ụbọchị ntọhapụ, ọ bụ ezie na Razer hapụrụ gị a ajụjụ ọnụ Maka gị jupụta ya ma mee ka ị mara ozugbo ọ dị njikere maka nzụta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Kọmputa » Laptọọpụ » Project Linda ma ọ bụ mgbe ekwentị Razer gị ghọrọ laptọọpụ